Shariif Xasan oo si rasmi ah u shaaciyay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shariif Xasan oo si rasmi ah u shaaciyay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inuu ka mid yahay musharixiinta u tartameeysa doorashadda xilka madaxweynaha Soomaaliya ee la filayo inay dhawaan ka dhacdo dalka.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegay inuu dhawaan bilaabayo ololihiisa doorashadda, si uu ugu guuleysto xilka ugu sareeyo qaranka Soomaaliya.
Sidoo kale, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhawaan ka qeyb galay shirkii madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Abuu Dhabi ee dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta ayaa madaxda dalkaasi u sheegay inuu isagu u sharaxan yahay xilka madaxweynaha Soomaaliya, balse aanay jirin musharax uu isaga shaqi ahaan wato.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah wasiiradda iyo xildhibaanadda baarlamaanka Koonfu Galbeed ayaa si kulul uga soo horjeestay musharaxnimadda madaxweynenimo ee Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxayna go’aankiisa ku tilmaameen mid baal-marayo dastuurka u degsan maamulkaas.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo mar soo noqday wasiirkii maaliyadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka KMG ahayd ee Soomaaliya ayaa inta badan la sheegaa inuu yahay siyaasi aan laheyn siyaasad sal leh, islamarkaana uu ciyaarayo siyaasad labo afle ah oo uu doonayo inuu musharaxiin kale ku noqdo caqabad uu kaga hor joogsan karo xilka madaxweynaha qaranka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa kusoo beegmaya, isagoo aan weli ku dhawaaqin inuu iska casilay xilka madaxweynaha maamulkaasi, taasi oo ugu dan leeyahay hadii uu kusoo bixi waayo doorashadaasi madaxweynaha Soomaaliya inuu kusii nagaado xilka uu haatan haayo.